Ọgbọ nke atọ Apple TV adịkwaghị maka ịzụta | Esi m mac
Apple TV 3rd ọgbọ adịkwaghị maka ịzụta
Hace un mes na anyị anọworị na-ekerịta na ndọrọ ego nke ngwaọrụ a na ụlọ ahịa ya na nke ahụ bụ na Apple akwụsịla ịre ọgbọ nke atọ Apple TV na ụlọ ahịa dị n'ịntanetị ma ọ nwekwaghị maka ịzụta eze. Ọgbọ nke anọ Apple TV nke ọhụụ riri nke mbụ Ma ọ bụ na n'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na ngwaọrụ adịlarị otu afọ, na mbata nke Siri nnyemaaka na ndozi emejuputa, a ọhụrụ set n'elu igbe dị elu karịa ndị ọzọ. Ọ bụ eziokwu na anyị na-ahụ ụfọdụ ntụaka maka Apple TV 3 na weebụsaịtị Apple ma ọ bụ na nkwado ma ọ bụ ọbụlagodi n'etiti ụdị eweghachiri nke ụlọ ahịa ndị America, mana ọrịre nke ngwaọrụ a abụghịzị onye ọrụ n'agbanyeghị eziokwu na iwu enyere rue ụbọchị.
N'ọnọdụ ọ bụla, ọ ga-aka mma mgbe niile ijide usoro ọhụụ ọhụụ ebe ọ na-enye anyị nhọrọ nke ngwa ndị anyị na-enweghị na usoro gara aga, onye otu ibe anyị Javier kwuru na nke a na nke a ọgbọ 3 Apple TV nọrọ na Spain ọkaraNa United States, enwere ike iji ọtụtụ ngwa ndị ọzọ na usoro ọwa telivishọn ma ọ bụ ọrụ USB ndị na-adịghị adị ugbu a na Spain.
Ugbu a ndị, dị ka m, nwere 3rd ọgbọ Apple TV nwere ike ịga n'ihu na-eji ya dịka na mbụ mana Apple agaghị ere ụlọ ọ bụla ọzọ nke a. N'aka nke ọzọ, ngwaọrụ ahụ na-arụ ọrụ zuru oke ma anyị nwere ike ịga n'ihu na-anụ ụtọ njirimara ya na ime ụlọ ahụ, mana ọ ga-edo anya na ọdịiche na njedebe dị n'etiti ụdị abụọ ahụ buru oke ibu. Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ ịzụta Apple TV, ị ga-ahọrọ usoro ọhụụ ọhụụ ebe ọ bụ naanị ya dị taa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Ngwaahịa Apple » Apple TV » Apple TV 3rd ọgbọ adịkwaghị maka ịzụta
Ọchịchọ zuru ụwa ọnụ maka Apple TV dị ugbu a na Spain na Mexico
Apple weputara nke atọ nke mmadụ Beta nke macOS Sierra 10.12.1